दाह्री काँसका फूल जस्ता छन्,दाँतहरु पहिरो गइसके,ओहो मुस्कान चाहिँ सुनाखरी जस्तो मनछुने “हेर्ने कथा” (भिडियो सहित)
प्रकाशित मिति : : सोमवार, बैशाख २४, २०७५
लगभग ३ वर्ष अगाडि चन्द्रवीरले अनौठो सपना देखे । जिन्दगीले ७२ वर्ष काटिसकेको थियो । खुमाले जन्माएका सबै सन्तान अन्धा थिए कान्छो बाहेक ।
होलसेलमा खमारी भन्छन् त्यो गाउँलाई । तर चन्द्रवीरको घर भएको भित्तोको कुनै नामै छैन । गाउँ भए पो नाउँ हुन्छ ।
चन्द्रवीरको घर जाने ठाउँ खोज्दै हामी दुइ फेर राजमार्गमा ओहोर दोहोर गर्यौं । जंगलको माझमा गाउँ होला जस्तो ठावैं थिएन । सोधखोज गरी पत्ता लगायौं । एउटा ताजा बाटोबाट जंगलभित्र छिर्यौं ।
त्यो बाटोमा केही महिनाअघि मात्र डोजर लागेको रहेछ । चन्द्रवीरले एक्लै खनेको बाटोमा ।
चन्द्रवीरले एक्लै खनेछन् बाटो । विल्कुल एक्लै । अनि हरेक दिन दुई वर्ष लगाएर खनेछन् पहाड र बनाएछन् बाटो । घरका अन्धा सन्तानहरु सजिलै हिँडडुल गर्न सक्लान् भने र
दाह्री काँसका फूल जस्ता छन् । दाँतहरु पहिरो गइसके । ओहो मुस्कान चाहिँ सुनाखरी जस्तो । अझै पनि दिनदिनै बाटो रेखदेख गरिरहन्छन् । खसेका ढुँगा माटा पन्छाइरहन्छन् ।
मलाई कहिले काहिँ लाग्छ हामी असाध्यै भौतिक भयौं । असाध्यै केन्द्रीकित भयौं कि ।
रानीपोखरीको संरचना कुन स्वरुपमा बनाउने ? काष्ठमन्डपमा कस्ता काठ हाल्ने ? काठमाडौंका बाटाघाटाका खाल्डाखुल्डी कसले पुर्ने । यहाँको प्रदूषणबाट बच्न कुन गुणस्तरको कस्तो मास्क प्रयोग गर्ने? मधुमेहका रोगीले कुन समय मर्निङ वाक गर्ने ? सडक विस्तार गर्दा छेउका शिरिषका रुखहरु काट्ने कि नकाट्ने?
यस्ता वहसहरु भइराख्दा चन्द्रवीर ओली के गरी बसेका होलान् ? शुक्रबारको साँझमा मातेका ट्वीटहरु टाइमलाइनमा आइरहँदा चन्द्रवीर ओली घर आइसके होलान् कि जंगलमै होलान् । वरपरको निर्जन जंगल र विहानदेखि वेलुकासम्म एकोहोरो कराउने चरा र बास्ने रातेका आवाजहरु उनलाई काठमाडौंको प्रदूषण जस्तै पो लाग्छन् कि !
ग्रहदशा ठीक छैन भन्थे चन्द्रवीर । उनका जिन्दगीका केही महत्वपूर्ण बाटाहरुलाई यस्तै ग्रहदशा बताउनेहरुले मोडिदिएका थिए । उनी पनि खुशि थिए आफू हिँडेको बाटोमा । ‘७५ सालमा मरिन्छ कि क्या हो’ भन्ने चन्द्रवीरलाई ७५ सालको अन्तिमतिर एक फेर भेट्न जान मन छ ।
उनको आँगनसम्म भाँ पूँ भाँ पूँ गर्दै एम्बुलेन्स पनि पुग्दैन होला
मेरा बा । चन्द्रवीर ओली ।
विद्या चापागाईं/हेर्ने कथाबाट साभार